Vaovao - Ahoana ny fitazonana ny toro-hevitra momba ny kojakoja bulldozer mandritra ny fotoana maharitra
Sprocket Segment Group
Front Idler Group
Ahoana ny fitazonana ny toro-hevitra momba ny kojakoja bulldozer mandritra ny fotoana maharitra
Ny fahatongavan'ny bulldozers dia nanampy anay hamaha ny olan'ny fandavahana tany sy vato.Saingy tsy hampiasaina mandritra ny fotoana kelikely ny bulldozers noho ny fiovaovan'ny vanim-potoana. Saingy mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiasana manaraka dia ilaina ny fikojakojana tsy tapaka ny ampahany amin'ny shandong bulldozer. Fantatrao ve ny fomba fikojakojana ny ampahany tsy ampiasaina amin'ny bulldozer
1. Fiomanana alohan'ny fiantsonana.
Diovy ny ampahany rehetra amin'ny fitaovana bulldozer, ary apetraho ao anaty efitrano maina ny milina, fa tsy any ivelany.
Raha ilaina, raha apetraka any ivelany, dia mifidiana gorodona fisaka, rakotra hazo. Aorian'ny fiantsonan'ny fiara dia tokony hosaronanao amin'ny lamba izany. Manaova asa fikojakojana toy ny famatsiana menaka, menaka ary fanoloana menaka.
Ny faritra miharihary amin'ny tsorakazo hydraulika cylinder piston sy ny tsorakazo fanitsiana kodiarana dia tokony hosaronana dibera. Ho an'ny bateria, esory ny "ratsy" ary sarony ny bateria, na esory amin'ny fiara ary tehirizo misaraka. Raha ny rano mangatsiaka dia tsy navoaka rehefa ambany ny mari-pana 0 ℃, ny antifreeze dia tokony ampiana amin'ny rano mangatsiaka.
2. Fitehirizana rehefa mijanona.
Amin'ny vanim-potoanan'ny fiantsonan'ny fiara dia atomboka indray mandeha isam-bolana ny bulldozer mba hitondrana lavidavitra kely mba hametrahana sarimihetsika misy menaka vaovao eo amin'ny faritra mandoko ny ampahany tsirairay ary hisorohana ny kojakoja tsy ho harafesina.Rehefa miasa ny fitaovana miasa, esory ny menaka mifono amin'ny piston rod amin'ny cylinder hydraulika, ary avy eo dia apetaho ny menaka aorian'ny fandidiana.
3. Tandremo aorian'ny fiantsonan'ny fiara.
Aorian'ny fanakatonana lava, raha mandritra ny fanakatonana ny faran'ny volana ho an'ny asa manohitra ny harafesina, alohan'ny fampiasana, dia tokony hokarakaraina toy izao manaraka izao ny kojakoja bulldozer: sokafy ny vilany misy menaka sy ny boaty solika tsirairay, esory ny rano mifangaro.Esory ny lohan'ny cylinder, fenoy menaka ny valva rivotra sy ny sandrin'ny rocker, fantaro ny toetry ny fiasan'ny valva amin'ny rivotra, raha misy tsy mety, Ny dozer dia apetraka amin'ny fanjakana banga tsy misy tsindrona diesel, ary ny dozer dia mihodina amin'ny starter. .Amin'izany fomba izany ihany no afaka manomboka ny dozer.
Fotoana fandefasana: Nov-07-2021
© Copyright 2021 : Zo rehetra voatokana.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile
Rollers Track fingotra, Mitondra Track Roller, High Strength Bolt, Exkavator Undercarriage Wear, Excavator bucket fanapahana sisiny, Ny kojakojan'ny siny excavator,